The mbụ sụgharịrị nke Moto P30 bụ ebe a Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, ekpughere ya na Motorola ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya na August 15. Ha bụ usoro atọ, nke mejuputara uzo Moto P30. Nụtụbeghị mbụ banyere ekwentị ndị a, n'ihi ya enwere obi ụtọ na mmasị gbara ha gburugburu. Otu ụbọchị mgbe emechara ya, anyị anatala ntụgharị nke mbụ nke ụdị ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụ maka Moto P30, nke anyị nwere nsụgharị ndị a. Ekele ha na anyị na-enweta echiche doro anya nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ụdị a n'ihe atụ nke imewe. Ọ dịkwa ka Motorola adaala maka ọtụmọkpọ nke ọkwa ọhụụ.
Ebe ọ bụ na ekwentị a nwere ọkwa na ihuenyo ya, nke na-adọta ọtụtụ nlebara anya. N'ime ọnwa ndị a, ihe a na-emekarị bụ iji obere ọkwa, mana Motorola na-agagharị na ntụgharị. N'ihi na ụlọ ọrụ na-agba mbọ ka a nnukwu notch, nke na-achịkwa ihuenyo ngwaọrụ.
Yabụ n'ezie enwere ọtụtụ ndị na - eri ngwaahịa na - agaghị enwe obi ụtọ na atụmatụ nke Moto P30 a. A na-atụ anya inwe ihe mmetụta abụọ na ihu, na azụ ekwentị anyị na-achọta igwefoto abụọ, doziri kwụ ọtọ na ihe mmetụta mkpịsị aka.
Maka ndị ọzọ, enweghi ọtụtụ ihe ịtụnanya ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ iji kwuo okwu. Ọ bụ ọkwa a na - enweta nlebara anya na Moto P30 a. You nwere ike ịhụ ma ọ bụ ghọta na ngwaọrụ ahụ ga-enwe nnukwu ihuenyo, dị ka asịrị kachasị ọhụrụ ọ ga-abụ 6,2 sentimita asatọ. Igwefoto azụ ga-abụ 16 + 5 MP.
O yikarịrị, Moto P30 ga-enwe gam akporo Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ ya. Mana anyị nwere ike idozi obi abụọ echi, ụbọchị a gosipụtara ekwentị a. Anyị na-echetara gị na mgbakwunye na ụdị a, P30 Note na P30 Play ga-abata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Wụkchara akpa nsụgharị nke Moto P30
Ngwa mkpanaka Samsung ga-abata tupu atụ anya ya
Xiaomi Redmi 6 na Redmi 6A rutere Spain